China Calcium base griiz rụpụta na ụlọ ọrụ | Sunshow
Calcium isi griiz
Flange Head kpọchie
Hex Head kpọchie
Cylindrical ala biarin
Silicone Rubber USB
Ike USB 32
Ugboro ugboro Conversion USB
Sunshow Complex calcium griiz
Ezigbo nguzogide mmiri, nkwụsi ike n'ibu dị mma na nkwụsi ike colloidal
Ngwaahịa ngwaahịa: * -20 ℃ ~ 120 ℃
Ọnụahịa: 208L, 20L, 16L ， 4L, 1L, 250g
Product agba: ngwaahia dị ka ndị ahịa mkpa
Njirimara ngwaahịa: mmanu dị irè, na-agbatị ndụ ndụ
Lọ ọrụ: mpempe
Calcium na-abụ abụba bụ mmanụ na-ajụ mmanụ viscosity nke na-esi ísì ụtọ nke mmanụ anụmanụ na nke ihe oriri (nke nwere abụba abụba na-edozi ahụ maka griiz na-edozi ahụ) na wayo, a na-ejikwa mmiri eme ihe dị ka peptizer. Ekere ya uzo anọ: l, 2, 3 na 4 dika cone oru. Onu ogugu buru ibu, o siri ike karie abuba? Ebe nkwụsị ahụ dịkwa elu. Griiz nke sitere na Calcium bu ihe ahia nke na-acho iwepu ya na uwa, ma a ka na-eji ya na nnukwu ego na mba m.
A na-ejikarị ya eme ihe maka mmanu nke ịgbagharị dị iche iche nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nke ugbo dị ka ụgbọala, traktọ, nfuli mmiri, obere na obere igwe, na akụkụ ndị dị mfe ịkpọtụrụ mmiri ma ọ bụ mmiri. Ebe ọ bụ na a na-ejikarị abụba sitere na calcium eme ihe na mkpakọ iko, a na-akpọkwa ya "iko abụba". Enwere ike iji ntụpọ ntụgharị na ọsọ dị n'okpuru 3000r / min n'ozuzu.
Nke 1 adabara maka usoro nri griiz gasị na esemokwu esemokwu nke chassis ụgbọala, yana ogo kachasị rụọ ọrụ bụ 55 Celsius.
Mba nke 2 dị mma maka ịgbagharị agba ọsọ nke ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, ibu ọkụ, obere na obere igwe (dị ka motọ, nfuli mmiri na ndị na-afụ ụfụ), akụkụ mmanụ dị ka ebe a na-agba ọsọ na njigide nke ụgbọala na traktọ, na akụkụ kwekọrọ n'ụsọ mmanụ dị iche iche. Igwe ọrụ kachasị elu Ọ bụ 60 Celsius.
Nke 3 adabara maka biarin nke igwe dị iche iche dị ọkara na ibu ọkara yana ọsọ ọsọ. Oke okpomọkụ na-arụ ọrụ bụ 65 Celsius.
Mba nke 4 dị mma maka nnukwu ọrụ, ngwa ngwa ngwa ngwa na akụrụngwa, yana oke ọrụ ọrụ 70 ° C.
Ezigbo nguzogide mmiri, ọ naghị adị mfe emulsify ma mebie mmekọrịta ya na mmiri, enwere ike iji ya na gburugburu mmiri ma ọ bụ na mmiri. Ọ nwere ezigbo ịkwa osisi na nkwụsi ike nkex, na obere nkewa mmanụ n'oge nchekwa. Nwere ezi pumpability.
(1) High idobe isi na ezi okpomọkụ na-eguzogide. Ngwakọta nke dabeere na calcium nwere ike iguzogide okpomọkụ dị elu karịa abụba ndị sitere na calcium. Ebe ọ bụ na griiz nke mejupụtara calcium anaghị eji mmiri eme ihe, ọ na-egbochi mwepu nke griiz na-anaghị eguzogide oke okpomọkụ.
(2) Ọ nwere ụfọdụ ogo nke mmiri na-eguzogide ma nwee ike ịrụ ọrụ na gburugburu mmiri ma ọ bụ na kọntaktị na mmiri.
(3) Ọ nwere mma n'ibu kwụsie ike na colloidal kwụsie ike, na ike ga-eji na elu-ọsọ Rolling biarin.
Nke gara aga: General Lithium Griiz
Osote: Griiz dị elu dị elu
Graphite Calcium na-ete mmanụ
General Lithium Griiz
Aluminom isi griiz
Griiz dị elu dị elu
Molybdenum Disulfide Lithium Griiz